- नमस्ते। हामी खुला छौं।
विलासिता क्यासल भाडा, मिडिया सिटी यूके, मैनचेस्टर, एमएक्सएनएक्स 50EQ
24 /7खोल्नुहोस् (24 घन्टा बुकिंग लाइन)
एक क्यासल बेडरूममा रहनुहोस्
सम्पूर्ण क्यासल भाडामा लिनुहोस्
एक टापु भाडामा लिनुहोस्
राजाको रूपमा जीवन बिताउनुहोस्
हाम्रो लक्जरी क्यासल होटल्सहरूको पर्दा एक उत्साहित विगतको भाग बन्न भित्र।
तपाईंको विवाहको लागि महल भाडामा लिनुहोस्!
तपाईंको विशेष अवसर साँच्चै स्मारक बनाउनुहोस्!
रियल्टीको स्वाद पाउनुहोस्!
इतिहासमा घेरिएको एक आश्वस्त हवेली केवल तपाईलाई आफ्नो छुट्टी विशेष बनाउन आवश्यक छ।
आफैलाई शाही भव्यतामा हल्लाउनुहोस्
हाम्रो प्रत्येक महलले खुसी, लक्जरी र भव्यताको चित्रण गर्दछ।
चाख छ: सम्पत्ति प्रकार चयन स्कटल्याण्डमा क्याल्स होटल्स - अनौपचारिक शान्ति र सिकन क्यासल वेडिंग स्थानहरू - मलाई बोल्ने उत्तम स्थान महल विवाह क्रिसमस आयरल्याण्डमा फिस्टेस्ट क्याल्स होटल्ससँग स्वीकार्यता प्राप्त गर्नुहोस् भाडामा एक विला सम्पूर्ण क्यासल भाडामा लिनुहोस् एक टापु भाडामा लिनुहोस् हनीमून लाइभ द नोबल लाइफ - स्वाद द म्याग्रेस्ट्रेट हिस्ट्री नयाँ वर्ष पार्टी तपाईंको बहुमूल्य क्षणहरू बनाउन यूकेमा एउटा महलको भाडा दिनुहोस् आत्म खानपान एक क्यासल बेडरूममा रहनुहोस् विला विवाह
यहाँ एक देश छान्नुहोस् ...
... र चयनित देश कोड यहाँ अद्यावधिक हुनेछ
Luxury Castle Hire - तपाईंको सपना जहाँ वास्तविकता बन्छ!
लक्जरी द्वारा के तपाईलाई बुझ्नुहुन्छ? तपाईंको साथीसँग महल बेडरूममा एक सप्ताहांत खर्च गर्दै वा तपाईंको विशेष दिन वा कार्यक्रम मनाउनको लागी सम्पूर्ण महल भाडामा लिनुहुन्छ? जुन तपाईंको आवश्यकता हो - तपाई लक्जरी क्यालेन्डर भाडामा प्रशस्तता पाउनुहुनेछ।
आत्म-खानपान परिवार छुटहरू
लक्जरी तपाईं आफ्नो मनपर्ने महल मा आनन्द लिनुहोस्, आफ्नो साथीहरु र परिवार संग अविस्मरणीय क्षणहरू सिर्जना गर्न र वर्षहरुका लागि ती सम्झनाहरु लाई तिर्नुहोस्!
विवरणहरू जाँच गर्नुहोस्: Castle Estates
पाँच-तारा लक्जरी संग्रह
यदि तपाईं असीमित सेवाहरू, लुटेच्छा सुइटहरू र इतिहासको एक अद्वितीय भावनाको सही संयोजन खोजिरहनुभएको छ - तपाईं सही ठाउँमा आउनुभयो!
आयरल्यान्डमा क्यासल ब्रेकहरू
रियल्टी जस्तो लाइभ र शानदार र ऐतिहासिक वातावरणको आनन्द लिनुहोस् जुन निजी द्वीपहरूमा हाम्रो गौरवशाली महल आवास प्रदान गर्दछ!
तिम्रो छ आफ्नै रयल क्यासल विवाह
सपना, रोमान्टिक, कथा विवाह हुनुको साथै महिमा महल, इतिहास र सान्त्वनाले भरिएको महलमा? लक्जरी महलहरूको हाम्रो शानदार संग्रह संग राजा र रानी जस्तै महसुस गर्नुहोस्!
Intimate Castle Wedding For Two सबै महल विवाह
क्रिसमस र नयाँ वर्ष ब्रेक्स
स्कटल्याण्डको सबैभन्दा चौंरी दृश्यमार्फत केही शानदार फ्लोरा र नानाको साथमा एक जादुई महल मा आराम क्रिसमस ब्रेक खर्च गर्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो महल आवास तपाईलाई चाहिन्छ!
नयाँ वर्ष ब्रेक्स
अलग हामीलाई के सेट?
हामी आफ्नो ज्ञान र विशेषज्ञता संग वास्तव मा bespoke अनुभवहरु लाई प्रस्ताव गर्छन र तपाईंलाई कुनै पनि विस्तार को व्यवस्था गर्न मा सहायता - कुनै पनि सानो या ठूलो कसरि - र तपाईंको आवश्यकता अनुसार अनुसार दर्जी।
हाम्रा विशेषज्ञहरूले तपाईको आवश्यकताहरू सुन्नु पहिले र त्यसपछि निष्पक्ष र ईमानदार राय प्रस्ताव
जस्तै कि हाम्रा विशेषज्ञहरूले हामी सबै महलहरू भ्रमण गर्छन्, तिनीहरूसँग प्रत्येक महलको बारेमा जानकारी र गहिरो ज्ञान छ
हाम्रो साथ, तपाईंले के देख्नुभएको छ तपाईले के तिर्नुहुन्छ। त्यहाँ लुकेका शुल्कहरू छैनन्
विलासिता कोस्टल्स मा विशेषज्ञहरु
के तपाइँ ब्रिटेन र आयरल्याण्डमा परी कथा कथा खोज्दै हुनुहुन्छ? लक्जरी क्यालेन्डर भाडामा, तपाइँले तपाईंको बजेट र आवश्यकता अनुसार भाडाको लागि विशेष महलहरूको हात-उठाइएको संग्रह पाउनुहुनेछ। हामीले तपाईंको अर्को लक्जरी बिदामा एक भव्य एकता बनाउन को लागी केहि राम्रो र विदेशी महल संग साझेदारी गरेको छ!
एक विशेषज्ञलाई बोल्नुहोस्
हाम्रो चित्रित महलहरू केहि दुनियाका सबैभन्दा उत्तम उदाहरणहरू हुन् जो अवांछित वास्तुशिल्प डिजाइनको। यी अधिकांश स्थानहरु, एक पटक महानता द्वारा बसेको छ, इतिहास मा भरिन्छ। हामीले तिनीहरूलाई साँच्चै साँसुकै अनुभव ल्याउनको लागि राज्य-ओ-कला सुविधाहरू लैजान्छौं। यी महलहरू अत्यन्तै अलंकृत निर्माण, विशाल बगैंचाहरू, आलु रङहरू र अमूल्य प्राचीन वस्तुहरूको घमण्ड गर्छन्। विशेष महान्हरूका हाम्रो विशेष संग्रहमा तपाईंको सपनाको आवास देखाउनुहोस्!
हाम्रो के ग्राहकहरू भन्नुहोस्
'हामी विश्वास गर्छौं कि सन्तुष्ट ग्राहक सबैको उत्कृष्ट व्यापार रणनीति हो। हाम्रा सबै भन्दा राम्रो अनुशंसकहरू हाम्रा खुसी ग्राहकहरू हुन् जुन हाम्रो अपरिचित सेवाबाट लाभ उठाइएका छन्। यसको लागि हाम्रो वचन नदिनुहोस्। हाम्रो क्लाइन्टहरू हाम्रो बारेमा के भन्नु भएको छ पढ्नुहोस् ... '
हामी लक्जरी क्यालेन्डर भाडामा एक महल बेडरूम मा हाम्रो बस्ने बुक गरे। भन्नु पर्दछ - तिनीहरूको सेवा अचम्म छ, अधिक माग्न सकेन।
हामी मेरी बेटीको जन्मदिनको पार्टीको होस्ट गर्न लक्जरी हॉल खोजिरहेका थियौं र त्यसपछि हामी लक्जरी क्यालेन्डर वरपर आइपुगेको थियौं - यसले टोलीलाई सम्भव बनायो। हामीले Norfolk मा Norfolk Inglethorpe Hall र हामी पूर्णतया सन्तुष्ट छौं।
उत्कृष्ट सेवा विलासिता कैसल भाडा को दल द्वारा प्रदान गरिएको। हामी तिनीहरूको दोस्रो छुट्टी उनीहरूको साथ योजना बनाइरहेका छौं। उनीहरूको सेवा लिनुहोस् र तपाईं अफसोस गर्नुहुन्न।
लक्जरी क्यालेन्डरको टोलीले हामीलाई एक अनुकूल सेवा प्रदान गर्यो जुन हाम्रो बजेट र आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा उपयुक्त बनायो। एक धेरै आकर्षक अनुभव।
हामी महल बेडरूममा बसिरहेका थियौ जुन हाम्रो छोटो 4-रातको बसको लागि सही थियो। सेटिङ शानदार थियो र हामीले सुन्दर महल बगैंचाको मेमोरेजिङ दृश्यको आनन्द उठाउनुभयो। हामी हाम्रो अर्को भ्रमणको लागि पर्खन सक्दैनौं। अलि लज्जास्पद क्यालेन्डर भाडा
Puggiestone House मा हाम्रो प्रवास को समयमा हामी सबै भन्दा सुन्दर र आकर्षक अनुभव थियो। अलि लज्जास्पद क्यालेन्डर भाडा थप छुटहरू योजनाको लागी तपाईंको विशेषज्ञ र सहयोगी टोलीको साथ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ।
हामीले हाम्रो सप्ताहांत ब्रेकमा लक्जरी क्यालेन्डर भाडामा बुक गर्यौँ र हामी अनुभवको साथ खुसी छौं। उत्कृष्ट सेवा र व्यावसायिकताको एक उत्तम संयोजन। र तिनीहरूको बारे सबै भन्दा राम्रो कुरा भनेको छ कि उनीहरूको हरेक बजेटको लागि केहि छ।
हामीले पारिवारिक उत्सवको लागी लक्जरी क्यालेन्डर भाडाबाट बुक गर्यौं र हामी खुशी छौं कि हामीले। हाम्रो सबै परिवारका सदस्यहरू र घनिष्ठ रिजल्टहरू महलको सुन्दरता, यसको वरपर र हामीले प्राप्त गरेका असाधारण सेवाहरूको धेरै खुसी थिए। अलि लज्जास्पद क्यालेन्डर भाडा
स्पैनिश वाटर केयमा हाम्रो बस्ने एक उत्कृष्ट अनुभव थियो। हामीले हाम्रो हनीमूनको लागि पुरा टापु बुक गर्यौं। महल हाम्रो आवश्यकता र छनोट सुन्न पछि विलासिता कैसल भाडा को टीम द्वारा सिफारिस गरिएको थियो। अलि लज्जास्पद क्यालेन्डर भाडा
मैले सधै महान् महोत्सवको सपना देखेको छु र मेरो जीवनको सबैभन्दा विशेष दिन एक राजकुमारी जस्तो महसुस गर्दछु। लक्जरी क्यालेन्डरले मेरो सपना सच्याएको छ। धन्यवाद!
मेरो व्यस्त कार्यक्रमको कारण मैले मेरो परिवार र साथीहरूसँग खर्च गर्न धेरै समय पाउँदैन। लक्जरी क्यालेन्डर भाडाको साथ, मैले मेरो साथीहरूसँग स्कुल र स्कटलिस्ट हाइइल्याण्डमा भर्खरको मौका पाएका थिए। यो अति आवश्यक ब्रेक थियो। लक्जरी क्याल भाडाको टोलीलाई धन्यवाद।
म एउटा टापुमा मेरो परिवारसँग क्रिसमसको छुट्टी बिताउन चाहन्छु। मलाई र मेरी श्रीमती - हामी दुवै सही स्थान खोज्दै थिए र त्यसपछि हामी लक्जरी क्यालेन्डर भाडाबाट Mustique आइल्याण्ड बारे जान्न आइपुग्यौं। हामी लक्जरी क्यालेन्डरको टोलीसँग धेरै प्रभावित छौं र उनीहरूको अत्यधिक अनुशंसा गर्नेछन्!
हामी हाम्रो हनीमून को लागि शान्त र शानदार ठाँउ खोज्छौं। लक्जरी क्यालेन्डर भाडाका विशेषज्ञहरूले हामीलाई सही आवास खोज्न धेरै सहयोग गरे। मेरी श्रीमती र मेरो साथमा एकदम राम्रो समय थियो। अलि लज्जास्पद क्यालेन्डर भाडा
हामी विदेशी स्थानमा भव्य विवाह गर्न चाहन्थ्यौं। र यसको लागि हामी सम्पूर्ण महल भाडामा लाग्यौं। हामीले लक्जरी क्यालेन्डर भाडामा सम्पर्क गर्यौं र तिनीहरूले हामीलाई सम्भव तरिकामा सहायता गरेका छन् - सही छनौटलाई छनौट गर्न हाम्रो छनौट अनुसार हामीलाई सही जानकारी दिन
हामी असाधारण आत्म-खानपान छुट्टी थाउहाउसहाउस कैसल र कोच हाउसमा थियौ - लक्जरी क्यालेन्डरको विशेषज्ञ टोलीको लागि धन्यबाद!
हामीले हाम्रो हनीमूनलाई लक्जरी क्यालेन्डर भाडाको साथ बुक गरिसकेका थियौं र क्यालिभिग्नि आइल्याण्डमा बसे। सुरुदेखि सुरु गर्न अद्भुत सेवा। धेरै धेरै धन्यवाद।
लक्जरी क्याल भाडा टोली हाम्रो सबै प्रश्नहरूको साथमा धेरै धैर्य थियो र हामीलाई हामीलाई सबै जानकारी प्रदान गर्थे। धेरै सिफारिश गरियो!
लागि बुकिङ क्रिसमस र नयाँ वर्ष
विलासिता कोला किराया,
मिडिया सिटी यूके,
24 /7खोल्नुहोस् (24 घण्टा बुकिंग सेवा)
कल कल गर्नुहोस् 0808 133 5988
अन्तर्राष्ट्रिय कलहरू: + 44 (0) 113 3450420
लक्जरी क्यालेन्डर किराया
25 वेस्ट 31 स्ट्रीट,
11th तल, न्यू यर्क शहर,
यात्रा जर्गन बस्टर
सम्पत्ति मालिक / एजेन्टहरू
हामीले कसरी मदत गर्न सक्छौं?
एक महलमा विवाह गर्नुहोस्
क्रिसमसमा एक क्यासलमा रहनुहोस्
नयाँ वर्षमा एउटा क्यासलमा रहनुहोस्
पारिवारिक स्व खानपान भाडामा लिनुहोस्
हाम्रो पत्राचार सूची सामेल
प्रतिलिपि अधिकार © 1960 - 2018 लक्जरी क्यालेन्डर सबै अधिकार सुरक्षित।
साइट डिजाइन र एलसीसी द्वारा विकसित
चयन देश Andorraसंयुक्त अरब एमिरेट्सअफगानिस्तानएन्टिगुवारबार्बुडाआङ्गुइलाअल्बानियाआर्मेनियानेदरल्यान्डएन्टिल्सअङ्गोलाअन्टार्कटिकाअर्जेन्टिनाअमेरिकी समोआअस्ट्रियाअष्ट्रेलियाआरूबाÅlandअजरबैजानबोस्निया र हर्जेगोविनाबारबाडोसबंगलादेशबेल्जियमबुर्किना फासोबुल्गेरियाबहराइनबुरुन्डीबेनिनसेन्ट बार्थेलेमीबर्मुडाब्रूनइबोलिभियाब्राजिलबहामासभूटानबुभेट टापुबोत्स्वानाबेलारुसबेलिजक्यानाडाकोकोस (कीलिंग) द्वीपकंगो (किंशासा)मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रकंगो (ब्रज्जविल्ले)स्विट्जरल्याण्डकोट डी'आइवरकुक टापुचिलीक्यामरुनचीनकोलम्बियाकोस्टा रिकाक्युबाकेप वर्डक्रिसमस आइल्याण्डसाइप्रसचेक गणतन्त्रजर्मनीडिजिबुटीडेनमार्कडोमिनिकाडोमिनिकन गणतन्त्रअल्जेरियाइक्वेडरइस्टोनियामिश्रपश्चिमी सहाराइरिट्रियास्पेनइथियोपियाफिनल्याण्डफिजीफकल्याण्ड टापुमाइक्रोनेशियाफारोईद्वीपफ्रान्सगावोनसंयुक्त राज्यग्रेनेडाजर्जियाफ्रेन्चगिआनागुएर्नेसीघानाजिब्राल्टरग्रीनल्याण्डगाम्वियागिनीग्वाडेलोपइक्वेटोरिअलगिनेआग्रीसदक्षिण जर्जिया र दक्षिण स्यान्डविच टापुहरूग्वाटेमालाGuamगिनीबिसाउगुयानाहङकङसुनेका र म्याकडोनाल्ड टापुHondurasक्रोएशियाहैटीहंगेरीइन्डोनेशियाआयरल्याण्डइस्राएलकामानिसको आइलभारतबेलायतभारतसमुद्रीभूभागइराकइरानआइसल्याण्डइटालीजर्सीजमाइकाजोर्डनजापानकेन्याकिर्गिस्तानकम्बोडियाकिरिबातीकोमोरोससेन्ट किट्स र नेविसकोरिया, उत्तरकोरिया, दक्षिणकुवेतकेमैन द्वीपकाजाकिस्तानलाओसलेबनानसेन्ट लुसियालिएखटेन्स्टाइनश्रीलंकालाइबेरियालेसोथोलिथुआनियालक्जेम्बर्गलाटवियालिबियामोरक्कोमोनाकोमाल्डोवामोन्टेनेग्रोसेन्ट मार्टिन (फ्रान्सेली भाग)मडागास्करमार्शलद्वीपम्यासिडोनियामालीम्यानमारकोमङ्गोलियामकाउउत्तरीमारिआनाद्वीपमार्टीनिकमाउरिटानियामोन्टसेर्राटमाल्टाMauritiusमाल्दिभ्समालवीमेक्सिकोमलेसियामोजाम्बिकनामिबियानयाँ कैलेडोनियानाइजरNorfolk Islandनाइजेरियानिकारागुवानेदरल्यान्ड्सनर्वेनेपालनाउरूनियून्यूजील्याण्डओमानपानामापेरुफ्रेन्चपोलीनेसियापापुआ न्यु गिनीफिलिपिन्सपाकिस्तानपोल्याण्डसेन्टपियरएन्डमिक्वेलनपिटकेर्नप्युर्तोरिकोप्यालेस्टाइनमापोर्चुगलपलाउप्यारागुवाकतारपुनर्मिलनरोमानियासर्बियारूसी संघरवांडासाउदी अरबसुलेमान द्वीपसेचिलिससुडानस्वीडेनसिंगापुरसेन्ट हेलेनास्लोभेनियासभाल्बार्ड र मायेन टापुस्लोभाकियासियरा लियोनसानमारिनोसेनेगलसोमालियासुरिनामसाओटोमरप्रिन्सिपएल साल्भाडोरसिरियास्वाजील्याण्डतुर्करकैकोसद्वीपचाडफ्रेन्च दक्षिणी ल्यान्डटोगोथाईल्याण्डताजिकिस्तानतोगोटिमोर-लेस्टेतुर्कमेनिस्तानटुनिशियाटोंगाटर्कीत्रिनिदाद र टोबागोतुभालुताइवानतान्जानियायुक्रेनयुगान्डासंयुक्त राज्य अमेरिका माइनर आउटलाइंग द्वीपसंयुक्तराज्य अमेरिकाउरुग्वेउज्बेकिस्तानभेटिकन सिटीसेन्ट भिन्सेन्ट र ग्रेनाडिन्सभेनेजुएलाभर्जिन टापुहरू, बेलायतीभर्जिन टापुहरू, अमेरिकाभियतनामभानुतुवालिसएन्डफुटुना द्वीपसामोआयमनमायोटीदक्षिण अफ्रिकाजाम्बियाजिम्बाब्वे
घण्टा 123456789101112 न्यूनतम 51015202530354045505560 PM AM